Umbono wePanspermia uyini umsuka wokuphila? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Imvelaphi yokuphila. Ngubani ongakaze enze umbono ngakho? Kunemibono eminingi eqhutshwa kokubili emphakathini wezesayensi, kanye naku-intanethi nasezwini lomlomo lezigidigidi zezakhamizi zomhlaba. Enye yezinkolelo-mbono zokufuna ukwazi ngemvelaphi yomuntu ingukuthi umbono wePanspermia. Wake wezwa ngaye? Kungumcabango osuselwa eqinisweni lokuthi umuntu angaba nomunye umsuka ohlukile kunalowo womhlaba. Okusho ukuthi, singaqhamuka kwenye ingxenye yendawo yonke.
Ungacabanga ukuthi uhlanga lwesintu aluzange lukhule ngemuva kolunye uhlobo lohlobo lweHomo ngemuva kokuvela futhi luqhamuke kwenye ingxenye yendawo yonke? Kulokhu okuthunyelwe sikutshela konke ngombono wePanspermia.
1 Uyini umbono wePanspermia osuselwa kuwo?
2 Izinhlobo zePanspermia
4 Abahlukumezi nabavikeli
Uyini umbono wePanspermia osuselwa kuwo?
Lo mbono ucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi sakhulelwa kwenye indawo yendawo enkulu kakhulu (noma engapheli njengoba ososayensi abaningi besho). Futhi kunemibono nezindlela eziningi esingasuka kuzo. Noma kufundwa ngokuhamba kwesikhathi, kuyinto ethi asisoze sazi ngezinga lokuqiniseka okungu-100%.
E-Panspermia kuthiwa umuntu angaba yisidalwa esithuthukiswe kwezinye izindawo zomhlaba futhi izakhi zofuzo zazo ezingene kwiPlanethi yoMhlaba ngezinkanyezi ezinomsila noma ama-meteorite athintwe ebusweni bomhlaba. Kungenzeka ukuthi, ngale ndlela, isidingo esandayo sokufuna ukwazi ukuthi kwenzekani ngaphandle kweplanethi singachazwa.
Kusukela lapho isayensi nokufundwa kwezinkanyezi sekuthuthukile, abantu bebelangazelela ukwazi okungaphandle kweplanethi yethu. Ngakho-ke, zama ukwenza uhambo oluya enyangeni, Mars noma ukwazi ukuthi yiziphi izinhlobo zamaplanethi eziningi kakhulu kithi Uhlelo lomkhathi njengaphesheya ifu Oort. Mhlawumbe konke lokhu kudalwa yisidingo sokuthi "uye ekhaya."
Futhi ukuthi lo mbono ucabanga ukuthi impilo yomuntu ifinyelele kwiPlanethi yoMhlaba ngokusebenzisa amafomu amancane kakhulu angaba khona sibonga izimo zokuhlala zeplanethi yethu. Sikwazile ukuqhamuka esikhaleni esingaphandle sibonga umthelela wama-meteorites nezinkanyezi ezinomsila. lapho yethulwe emhlabeni, ukuziphendukela kwemvelo kwenza umuntu wakhula njengoba sazi namuhla.
Kunezinhlobo eziningana zePanspermia abanye ososayensi abavikela njengesiqalo sempilo eMhlabeni. Kuyaziwa njenge-Natural and Directed Panspermia. Sizohlaziya ngasinye sazo ukuqonda kangcono izici zazo.
Yiyona lapho athi konke okuphilayo okwakhiwe eMhlabeni akuhleliwe futhi kujwayelekile. Ngaphezu kwalokho, imbangela yawo ngamatshe ahlangane ebusweni bomhlaba abenezinto eziphilayo. Iplanethi enguMhlaba isendaweni "yokuhlala" yesistimu yelanga. Ngakho-ke, ngenxa yezimo zemvelo, ingabamba amanzi nokushisa okuzinzile.
Futhi, izingqimba zomkhathi ziyasivikela emisebeni eyingozi evela eLangeni. Kungenxa yalokhu ukuthi impilo emhlabeni ikwazile ukuthuthuka.
Lolu hlobo lwethiyori lungaphezu kwalabo bantu abanesibindi nabazungu. Uzungu luyinto egcwele kakhulu emibonweni yezigidi zabantu abahlala eMhlabeni. Kumayelana nokucabanga ngalokho konke okwenzekile ngokuziphendukela kwemvelo nempilo yomuntu kunesizathu. Lokho wukuthi, inqubo lapho i-meteorite noma i-comet ithinte ngayo uMhlaba ngama-microorganisms akwazi ukuthuthukisa impilo yomuntu iqondiswa ngothile.
Ngalo mqondo, singasho ukuthi i-Panspermia eqondisiwe ingenye lapho impilo eMhlabeni yayiphoqwa ngothile futhi kwakungeyona inqubo engahleliwe. Lo mbono uhlukaniswe yilabo bantu abacabanga ukuthi lokhu kwenzelwe ukudala izinto eziphilayo emhlabeni kanye nalabo abacabanga ukuthi iplanethi yethu ingaya phesheya ukuze iqhubeke nokwenza okudingekayo kweminye imihlaba yezinye izinkanyezi ezikude.
Kungumqondo ophusile ukucabanga ukuthi imvelaphi yokuphila emhlabeni kwakuqondiswe ngqo. Ngayiphi injongo? Okusho ukuthi, esimweni lapho kwakukhona ukuphila okuhlakaniphile kwamanye amaplanethi akude kakhulu, kungani babengathumela ngokuqondile izinto eziphilayo kude kangaka? Kungenzeka yini ukuthi iplanethi enguMhlaba iwukuphela kweplanethi okungahlalwa kuyo endaweni enkulu yingakho bekufanele baphendukele kuyo?
Kunemibuzo eminingi edala lolu hlobo lwemibono. Futhi ukuthi imvelaphi yokuphila yinto okuthi, noma ngabe ososayensi bacwaninga kangakanani, asisoze sazi i-100%, ngoba "akekho owayekhona ukuyitshela." Njengoba ungeke wazi ukuthi yini emva kokufa, asikwazi ukubuyela emuva emuva futhi sazi into yokuqala ekhona kusukela ekuqaleni kwesikhathi.
Elinye lamaqiniso elenza le mbono icabange njengeyiqiniso ubukhona bezinto eziphilayo ezikwazi ukusinda emkhathini. Lokho okungukuthi, yizilwanyana ezincane ezingathinteki ngokungabi namandla adonsela phansi noma i-oxygen ukuze ziphile. Abanye bacabanga ukuthi izinto eziningi zesikhala zithanda I-Voyager mission yenzelwe abantu ukuthi basabalalise "imbewu" kwezinye izindawo ezikhaleni noma ukuxhumana nalabo abasithumele lapha.
Kule mbono kukhona bobabili abavikeli nabahlehlisi. Lezi zamuva yilabo abacabanga ukuthi izinto eziphilayo azikwazi ukusinda kumthelela we-meteorite eMhlabeni. Okokuqala, lapho kuthintwa nomoya osemkhathini, ushintsho olwedlulele lokushisa lisho ukuthi akukho nyama esiyaziyo eplanethi yethu engaphila kuyo.
Ngakho-ke, ngokulandela izinyathelo zalethiyori, ukuze uphile eMhlabeni kuzofanele uhlangabezane nezimo zasemhlabeni, ngakho-ke ayikwazanga ukusinda kumthelela wobukhulu obunjalo.
Noma ngabe kuyini, iPanspermia ingenye yemibono eminingi ekhona ngokuthuthukiswa kwempilo emhlabeni. Futhi wena, ingabe uyazi enye inkolelo?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Umbono wePanspermia uyini umsuka wokuphila?